Ama-Dismembrators asebenza kahle kakhulu e-Ultrasonic - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-dismembrators we-Ultrasonic asetshenziswa kakhulu endaweni yokucwaninga, ebhentshini kanye nasemkhakheni ukulungiselela ukumiswa okungahambi kahle kwama-colloidal anjenge-emulsions nokusabalalisa ngama-droplet noma osayizi bezinhlayiyana ku-submicron- ne-nano-range. Ngaphezu kwalokho, ama-dismembrators e-ultrasonic asetshenziselwa ukuphazamiseka kweseli, i-lysis, ukuhlukaniswa kwe-DNA kanye nokukhishwa. Ama-dismembrators we-Ultrasonic ayigugu njengoba esebenza kakhulu, athembekile kakhulu futhi asebenziseka kalula.
I-dismembrator iyithuluzi lokususa ulwelwesi kuketshezi. Izicelo ezijwayelekile ze-dismembrators ukulungiselela kwama-emulsions, ama-dispersions, i-cell lysis kanye nokuqedwa. Ama-dismembrators we-Ultrasonic aziwa njengethembekile kakhulu futhi esebenza kahle lapho kulungiswa ama-emulsions, kufaka phakathi ama-submicron-emulsions nama-nano-emulsions, ukumiswa kanye nokuhlakazeka ngezinhlayiya ezingezansi kwama-micron kanye nano. Ku-biology, biochemistry kanye ne-bio-science, ama-dismembrators asetshenziselwa ukuvula izakhiwo zeseli ngokuphazamisa ulwelwesi lweseli noma izindonga zeseli. I-Ultrasonic lysis ikhipha okokubamba okungama-intracellular njengamaprotheni, ama-organelles nezakhi ze-bioactive ku-solvent.
Izicelo ze-Ultrasonic Dismembrators
Homogenization of Cell Supensions / Cell Cultures
Ukucheba kwe-DNA / RNA
Ukuqhafaza Amaphisi kanye namathebulethi
I-Ultrasonic dismembrator UP200St
Ungayisebenzisa kanjani i-Ultrasonic Dismembrator
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngebanga le-dismembrators ebanzi – kusuka kudivayisi ye-lab ebanjwe ngesandla phezu kwe-bench-top ultrasonicators to dismembrators yezimboni. Ukusuka kuma-watts angama-200 kuya phezulu, bonke abahlukanisi be-ultrasonic bahlonyiselwe isithonjana sokuthinta sedijithali, isoftware ehlakaniphile evumela ukumiswa kokuqala kokusebenza kwamamodi (isib. Umjikelezo womsebenzi, ubude besikhathi se-sonication, ikhefu njll.) Uhlelo lokusetshenziswa kwezindlela zokusebenza, i-protocolling yedatha ezenzakalelayo ikhadi le-SD elakhelwe ngaphakathi (isib. ukukhuphuka, isikhathi se-sonication, amandla we-net, amandla okushisa, uma kusetshenziswa inzwa ye-plugable temple), ingcindezi (uma kusetshenziswa inzwa yengcindezelo ye-plugable), usuku nesikhathi isitembu) izici ezingaphezulu, ezenza ama-Hielscher dismembrators abe homogenizer esebenziseka kalula kakhulu.
Kwisampula amavolumu angaphansi kwe-20mL, kunconywa i-pro-microbe. Kumasampula amakhulu, ama-prosesa we-ultrasonic enobubanzi obukhulu afanelekile.
Xhuma i-dismembrator ye-ultrasonic ekunikezelweni kwamandla futhi uvule idivaysi. Umbukiso wombala wedijithali uzovula. Sebenzisa izilungiselelo kumenyu ukuze uguqule ukuphakama. Imvamisa, kunconyelwa i-100%. Ngokukhetha, ungabeka isikhathi sangaphambi kokusethwa kwe-sonication, imijikelezo yomsebenzi kanye / noma okufakwayo kwamandla okufaka.
I-Sonication iyindlela yokwelapha engeyona eyokwelapha. Kodwa-ke, uma amandla ehlanganiswa abe yi-Medium, igcina isiphenduka ukushisa (umthetho wokuqala we-thermodynamics / umthetho wokongiwa kwamandla). Ngokuya kokuzwela kokushisa kwento eyisampula, ukusetshenziswa kwethambo lokugeza iqhwa kunganconywa. Usebenzisa imodi yomjikelezo, ivumela isampula ukuthi yehlise umoya ngesikhathi sokuphumula kwe-sonication.
Futhi, imikhawulo yokushisa ingasetwa kuqala. Uma inzwa yokushisa eyi-plugable ingalinganisa amazinga okushisa ngaphezu komkhawulo obekiwe, i-dismembrator ye-Ultrum imisa isikhashana kuze kufike kufinyeleleke i-delta delta bese iqala bese ibuye ibonane futhi.
Sebenzisa ama-plugs endlebe noma ibhokisi lokubiyela lomsindo.
Yehlisa umkhondo we-ultrasonic (sonotrode) esitsheni ngesampula. Ithiphu ye-sonotrode akufanele ibe ngaphansi kwezikhathi ezi-1 kuye kwezingu-1.5 zedayiphu yepayiphu kweleveli yesampula.
Cindezela inkinobho engu-ON ukuqala inqubo ye-sonication. Ngokuya ngevolumu yesampula nejometry yomkhumbi, ungahle uhambise umkhondo we-ultrasonic ngobumnene ngokusebenzisa okuphakathi ukuthola ukwelashwa okuningana kakhulu. Ukusetshenziswa kwesishukumisi sikazibuthe nakho kuyindlela enhle yokusiza ekuthuthukiseni ukuhamba kwe-macro kuketshezi.
Ngemuva kwe-sonication, vala ucingo bese ususa uphenyi uketshezi. Isampula ilungele izinqubo ezilandelayo. Hlanza i-sonotrode ngokusula ngokuphelele ngotshwala.
Izicelo zokulungiswa kwesampula njengokuthi homogenisation, dispersing, emulsation, dissoling, ukuphazanyiswa kweseli, i-lysis, isizinda samaprotheni, isizinda se-DNA / RNA, i-DNA kanye nokucheba / ukuhlukaniswa, ukuhlelwa kwe-ChIP, ukususwa kweWestern, ukucwilisa / ukukhulula phakathi kweminye imisebenzi ejwayelekile kuma-dismembrators e-ultrasonic.
i-dismembrator ye-ultrasonic UP200Ht
Isimiso esisebenzayo se-Ultrasonic Dismembrators
Ama-dismembrators we-Ultrasonic asebenza ngesisekelo se-acoustic cavitation. Nge-probe ye-ultrasonic (eyaziwa nangokuthi yi-sonotrode), amaza aphezulu we-Ultra we-Ultra adluliselwa ku-inqubo ephakathi nendawo (okusho uketshezi, ukuqina, ukumiswa kweseli njll). Amagagasi e-ultrasound adabula uketshezi, lapho lapho enza khona imijikelezo eshintshashintshashintsha ephezulu, yomfutho ophansi. Ngesikhathi sokucindezela kwamabhamuza we-vacuum ngomzuzu omincane, okubizwa ngokuthi ama-cavitation bubble, avela. Lama-bubble we-cavitation akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yokucindezela aze afike usayizi, lapho engeke akwazi ukufaka amanye amandla. Kuleli qophelo, ama-bubble we-cavitation afaka ngamandla ngobudlova futhi adale izimo zasendaweni ezedlula njengezinga lokushisa eliphakeme kakhulu, izingcindezi, izinga lokushisa ngokweqile kanye nokwehluka kwengcindezi (ngenxa yokushisa okuphezulu / amazinga okupholisa nokushintshashintsha kwengcindezi), iziphithiphithi ezincane nemifudlana ewuketshezi efinyelela ku-kufika kuze kube manje. 180m / s. Lezo zimo zibonisa imiphumela embonakalayo ebalulekile yezinhlayiya eziphakathi nendawo, ngoba imifudlana ewuketshezi ephezulu isheshisa izinhlayiya eziphakathi nendawo ukuze izinhlayiya zishayane. Ngokushayisana kwezinhlayiya, izinto eziqinile (isib. Izinhlayiya, imicu, amaseli) ziyavela, ziyaqhekeka futhi zihlukaniswe izingcezu ezinobukhulu obukhulu. Ezinkambisweni zamaseli nokumiswa kwamaseli, izindonga zeseli, ama-membrane amaseli nezicubu kuyaphazamiseka kanti nezinto ezikhethekile ziyakhishwa ngenxa yomthelela we-sonication.
Izidubedube eziphakeme ezenziwe yi-ultrasonication zibuye zikhuphule ukudluliswa kweningi phakathi kwezigaba futhi zikhuthaze ukuncibilika kwamandla empuphu noma ukusabela kwamakhemikhali okukhulu kakhulu. Lokhu kwenza ama-dismembrators e-ultrasonic abe yithuluzi elithandwayo kwelebhu, umshayeli wezindiza nezindawo zezimboni zokwenza izinqubo ezinjengokugaya izinto ze-nano-materials, ukusabalalisa, ukukhipha emulsation, i-lysis, ukukhishwa kweseli, nokuqedwa.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonic Dismembrators
Imenyu / Izilungiselelo Enembile
Izesekeli Ezihlukene Ezitholakalayo
Izesekeli ezitholakalayo ze i-dismembrator ye-ultrasonic UP200Ht
Ama-Dismembrators Asezingeni eliphakeme kunoma yisiphi isayizi
Iphothifoliyo ka-Hielscher ye-dismembrators ye-ultrasonic ifaka uhla oluphelele kusuka kumadivayisi aphethwe ngesandla asezingeni elithile kuya ezinhlelweni ze-dismembrator ezigcwele ukungaphathesi amanani amakhulu. Amasampula amancane nosayizi aphakathi nendawo avame ukuphathwa emiqandeni, ezikhuphukeni zamakhorali, kumashubhu (isib. Amashubhu e-Eppendorf amashubhu e-Falcon), nabakhi bengilazi noma ngemikhumbi yepulasitiki. I-sonication yamanani amakhudlwana kuvame ukwenziwa kahle kwimodi eqhubekayo yokugeleza usebenzisa i-reactor ye-inline.
I-Hielscher inikeza izinhlobo ezahlukahlukene zezesekeli ze-ultrasonic ukuze zishintshe ulwelwesi lwakho lwe-ultrasonic ngokwezidingo zakho zokucubungula. Izinketho zitholakala ngosayizi nobukhulu obuhlukahlukene, ungakhetha kumaseli okugeleza nokuphendula ngamanani ahlukahlukene namajiyometri. Izinzwa zokushisa nezingcindezi, amakhabethe okuvalelwa komsindo, ukushintshwa kwezinyawo okude nezinye izesekeli eziningi ezingezengezwe ezisekhelefini.
Ama-dismembrators we-Ultrasonic I-UP100H (100 watts) futhi I-UP400St (400 Watts)
I-UIP1000hdT – i-1000 Watts enamandla e-dismembrator enamandla e-batch ne-inline sonication
Ukulawulwa Kwenqubo Eqondile Nokuphakama Komsebenzisi-Ubungane
I-Hielscher Ultrasonics igxila kuma-dismembrators weseli osebenza kakhulu ngobungani obukhulu kakhulu bomsebenzisi kanye nenqubekela phambili yezobuchwepheshe yezwe. Lokhu kusho ukuthi amazinga we-Hielscher lab dismembrators avumelana ngokwengeziwe nobuhlakani bemishini yezimboni. Umsebenzisi angalawula amadivaysi e-digital e-Hielscher ngokusebenzisa i-browser elawulwa kude. Isoftware yokuqoshwa kwedatha ezenzakalelayo ibhala yonke imingcele ebalulekile ye-ultrasonic efana namandla net, amandla aphelele, amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, isikhathi nosuku njengefayela le-CSV ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, ama-dismembrators e-ultrasonic angahlelwa ngokuzenzakalela ukuvala ngemuva kwesikhathi esinqunyelwe noma okokufaka amandla athile noma izindlela zokudonsa ze-sonication. Izinga lokushisa elinokubhoboka kanye nezinzwa zokucindezela zivumela ukulandelela ngokucophelela izimo zesampula. Njengoba ukulawulwa kwezinga lokushisa kwezinto ezibonelela ukushisa kuyinto ebalulekile yekhwalithi yemiphumela yenqubo, uHielscher unikeza izixazululo ezahlukahlukene zokugcina izinga lokushisa inqubo ebangeni eliqondiwe lokushisa.
Imisebenzi eyindida ye-Hielscher homogenizer ye-Hielscher iqinisekisa inqubo ephezulu kakhulu yokulawula, imiphumela enokwethenjelwa futhi ehlelekile ye-sonication, ubungani bomsebenzisi nenduduzo yokusebenza.
Izinga eliphakeme kakhulu – Yenziwe eJalimane
Njengebhizinisi eliqhutshwa ngumndeni futhi eliqhutshwa ngumndeni, iHielscher iyaziqhenya ngekhwalithi ephezulu yonjiniyela bayo be-ultrasonic. Zonke izinto ezisebenza nge-dismembrators zenziwa, zenziwa futhi zahlolwa ekhanda lethu eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Thenga i-Ultrasonic Dismembrator yakho
Ungathenga ama-dismembrators we-Hielscher ultrasonic kuwo wonke amasayizi ahlukene futhi uhla lwamanani linikeza i-ultrasonicator engabizi ehambelana nesabelomali sakho. Ukusuka kokulungiswa kwesampula kwizivalo ezincane zelebhu kuya ekugelezeni okuqhubekayo-kokusakazeka kanye nokushumeka kwama-slurries ekukhiqizweni kwezimboni, i-Hielscher Ultrasonics ine-dismembrator efanelekayo ngokuphelele kuwe! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma i-ultrasonicator ekahle yohlelo lwakho nezidingo zakho!
Ama-dismembrators e-Ultrasonic angamadivayisi aguqukayo, angasetshenziswa ukwenza izinhlelo ezahlukahlukene ezihlukene njengokuthi homogenisation, dispersing, emulsation, milling, dissocigration, cell ukuphazanyiswa, i-lysis, ukukhishwa kwamaprotheni, ukugunda kwe-DNA, i -assassing & de-aeration, dissolting kanye sono-amakhemikhali ukusabela. Ngakho-ke, ama-dismembrators e-ultrasonic ayaziwa ngokuthi ama-tishu homogenisers, ama-cell disruptters, ama-disintegrators e-ultrasonic, ama-ultrasoner akhipha, abahlanganisi be-ultrasonic, amamayela we-ultrasonic noma abacibilikisa i-ultrasonic.